योस ब्रेक किन रहस्यमय रूपमा ढुवानी भयो? मार्टिन भिजल्याण्ड
जोस ब्रेकको नजिकैको कथा, निकी वर्स्टपेनको अभियुक्त हत्यारे र अपहरणकर्ताले ठूलो उचाइमा उडेको छ। कल उहाँ नीदरल्याण्डमा एक निजी विमानको साथ हस्तान्तरण गरिएको थियो। यसले केहि खर्च गर्न सक्छ! एक अनुसूचित उडान सम्भव थिएन, किनभने हामी उडान खतरनाक औषधि मालिकको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं जसले कुनै पनि समय आफ्नो माफिया मित्रहरू द्वारा मुक्त हुन सक्दछ। जोस ब्रेक, वा अगाडी जान जान्छ, स्पष्ट रूपमा देखा पर्दैन। निर्धारित अनुसूचित उडान सुविधाजनक थिएन, किनकि मानिसहरूले उसको अनुहार देख्न सक्थे र त्यसपछि तपाइँ अब हलिउड शैली माथि टिंकर गर्न NVIDIA सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। के! निजी विमान चाँडै Schiphol मा एक हॉल पछि पार्क गरिएको थियो। त्यसो भए de telegraaf त्यहाँ उल्लेख छ:
यो इन्दनभवन एयर बेस थिएन, मस्टिचरिट एयरपोर्ट पनि होइन, तर 'बस' को राष्ट्रीय हवाई अड्डा जहाँ लामो समय पछि, सबै भन्दा पछि लाग्ने व्यक्ति नेदरल्यान्डमा पुग्यो। सानो व्हाइट विमान जसको संदिग्ध बार्सिलोना देखि हाम्रो देशमा पुग्यो, तुरुन्तै एउटा हल पछि उड्यो जहाँ विमानहरू निरीक्षण गरिन्छ।
एक ब्ल्याक-अन्धेड भ्यानले केहि अन्य साथी कारहरूसँग विमानमा फर्केर आए। त्यसपछि यो तुरुन्तै थोरैकस्टाटैटमा अवस्थित क्षेत्रमा चुस्त थियो, जहाँ रनवे स्थित छ जुन मुख्य रूपले निजी उडानहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ।
कल्पना गर्नुहोस् कि हामी जोसको अनुहार पनि झल्किनेछौं। तर चिन्ता नगर्नुहोस् (हामी पुनः साजिशमा सोच्न इन्कार गर्न चाहन्छौं) जोस अझै पनि उनको अनुहारको तस्विरमा आउछ। ध्यान दिनुहोस्! सबै पछि, हामी 'मिडिया द्वारा पीटर आर डी देवेज परीक्षण"अनि यसैले कथा जारी राख्न जारी राख्नुपर्छ। यो सबै होइन कि हामी प्रश्न सोध्न कि केस मामला छ कि छैनौं; यो पनि सबै प्रश्नमा छैन कि हामी यौन दुर्व्यवहारको बारेमा कुरा गर्दैछौँ (किनकि कुनै एनएफआई प्रमाणले त्यस दिशामा संकेत गर्दछ)। होइन, यसले कसैको सार्वजनिक निलम्बनलाई चिन्ता गर्छ जुन सञ्चारकर्मीको रूपमा (अपराधीको रूपमा पिस्नोमा झल्किन्छ) भनी मीडियाले धक्का दिएको छ। एनएफआईले हत्या वा यौन दुर्व्यवहार कहिल्यै देखाएको विचार र यो भेट्टाइरहेको छ कि डीएनएलाई सहयोग बिना नै वास्तवमा कुनै अर्थ छैन, हामी निगल गर्दैनौं। हामी त्यो सुन्नु हुँदैन! हामी एक क्रिस्फिक्सिक्स चाहन्छौं र हामी पहिल्यै जान्छौ कि को हो। ती सबै अनन्त सिरका लगाउने साजिश विचारधाराबाट जोगिन सक्ने विचारहरू एकैचोटी समाप्त हुनु पर्छ।
मैले 31 अगस्टमा यो लेखे। कृपया समस्या लिनुहोस्:
व्हीलको आविष्कार, भाप इन्जिन, बिजुली र इन्टर्नेट सफलताजनक थियो, तर डीएनए सम्भवतः सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। त्यस डीएनएको लागि धन्यवाद हामी अहिले 100% जान्दछौं भनेर सुनिश्चित गर्दछ कि जोस ब्रेक हत्यारा र निकी वर्टपेनको यौन दुर्व्यवहार हो। यसकारण यो एक हड्डी को आनन्द संग मार्को छ कि निकईको परिवार अन्त मा स्पष्टता छ। तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि आमाले आँखामा भयानक हत्यारा हेर्न चाहन्छ!
डीएनए पाउँदा कस्ता जटिलताहरू छन् भने यदि 100% केहि प्रमाण सावित गरिन्छ? तपाईंलाई सधैं आवाश्यक छ। कहीं उपस्थित हुनु भनेको तपाईं हत्यारा हुनुहुन्छ वा यौन दुर्व्यवहार हो। यौन अपराधमा संलग्न हुनुको मतलब यो होइन कि तपाई यौन दुर्व्यवहारको मामलामा दोषी हुनुभएको छ।
यो आशा छ कि तपाईं उपर्युक्त एकोडोटबाट केहि स्पष्ट हुनु भएको छ कि डीएनए लाई वास्तवमा अपराधको बारेमा केही भन्न नसक्ने हुन्छ। Nicky Verstappen को मामला मा, उदाहरण को लागि, एनएफआई स्वत: सूचना रिपोर्ट कभी नहीं दिखाए कि उनलाई हत्या गरिएको छ। साथै, यौन दुरुपयोग भएको कुनै प्रमाण छैन। यसैले पड़ोसीसँग वर्णन गरिएको तपाईंको मामलाको तुलनात्मक रूपमा तुलनात्मक छ।
के तपाई भविष्यमा त्यस्तो स्थितिमा अन्त्य गर्न चाहनुहुन्छ? यदि नयाँ विधान चाँडै आउनेछ - यस मिडिया होप को मामला र पीटर आर डी वेस्स मार्फत इमोजिलाइङको लागी धन्यवाद, तपाई छिमेकीसँग कफीमा जाने बेला तपाई कपालनेट र रबर कपाल लुगा लगाउनु पर्छ।
अपराध फाइल निकी वर्स्टपेन 29 जुन 2001:
र यदि तपाईंले यसलाई सिङ्क गर्नु भएको छ भने, म छवि सिर्जनाको क्षेत्रमा हालको स्थितिको समीक्षाको सिफारिस गर्दछु। केवल किनभने यो सम्भव छ र किनभने यो यसको बारे केहि जान्न उपयोगी हुन सक्छ।
केवल हामी केवल कसैलाई 2016 मा एक प्रत्यक्ष साक्षात्कार दिन सक्षम हुन सकेन र, वास्तविक समयमा, अनुहार प्रयोग र यसमाथि अर्को व्यक्तिको आवाज (हेर्नुहोस् यहाँ), NVIDIA सफ्टवेयर पनि पूर्ण रूपमा गैर-अवस्थित व्यक्ति बनाउन सक्नुहुन्छ (तल हेर्नुहोस्)। तर बा, वास्तव मा हामी बस यो नहीं सुनना चाहते हो! एक अभिनेता-पिट्सीको लागि बिग-पैसा वा केहि जस्तै चराको बारेमा नबिर्सनुहोस्। यसलाई छुटकारा पाउनुहोस्! उजुरीकर्ता! हामी केवल रक्त हेर्न चाहन्छौं। तयार छ! त्यो अतिथिमा हान्नुहोस्! र अहिले सबै अचानक डीएनएन रिलीज गर्न, स्वाइप गर्न आवश्यक छैन।
सम्पूर्ण फाइल यहाँ पढ्नुहोस्
ट्याग: by, सतावट, विशेष, जोस ब्रेच, औसत, हत्या, Nicky Verstappen, पीटर आर डी देम्स, निजी, परीक्षण, संदिग्ध, विमान
7 सेप्टेम्बर 2018 मा 01: 05
कथा crazier हुँदैछ। बिहीवार सेप्टेम्बर 6, बेटभिटर पीटर आर डी वेल्सले दावी ब्रेकले हिडिको मास डीएनए परीक्षणमा भाग लिइसकेका छन्। कसरी डीएनए धेरै वर्ष पहिले 'नाश गर्न' हुन सक्छ किनकी यो अब सान्दर्भिक छैन?
7 सेप्टेम्बर 2018 मा 18: 45
सायद वास्तविक समस्या यो हो कि हामी यस संसारमा ध्यान केन्द्रित छौं। हामी उच्च वा कम छलांग गर्न सक्नुहुन्छ, तर यदि तपाईं भित्रको आफ्नै सत्य पत्ता लगाउन सक्नुहुन्न भने, तपाईं अधिक वा कम हराउनुहुन्छ। साँच्चै सबै कुरा भ्रम हो।
यो जस्तो देखिन्छ कि संसार सम्वन्धको लागि तयार छैन, वा आत्मा संग सम्पर्क।
जबसम्म तपाईं भित्र जान चाहनुहुन्न भने, यो बन्द हुन्छ।
मार्टिन वास्तवमा बुझ्दछन्।
त्यहाँ एक मात्र छ। 1
« टम क्लेजन संग साजिशहरु संग तुलना
एलन मस्क सिमुलेशन सिद्धांत को बारे मा, आशावाद र 'यात्रा' »
कुल भ्रमण: 13.789.243
विश्लेषण गर्नुहोस् op रोबर्ट जेन्सेनको "डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ विश्व अर्डरमा विश्वास गर्दैनन्" भनेर प्रमाणित गर्दछ: जेन्सेन.एनएल नियंत्रित विपक्षमा छन्
सनशाइन op छापा सुरु भयो? साइंसलाई एलेन बोर्स्ट / बार्ट भ्यान यू केसमा आधारित 2018 मा साइकोल्यान्सलाई पहिले नै हरित प्रकाश दिइयो